Minecraft Java တွင် touchscreen ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Minecraft touchscreen mode - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Minecraft touchscreen mode - ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Minecraft Java တွင် touchscreen ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
သင်လုပ်နိုင်သည်သက်ဝင်စေကိုအသုံးပြု။ ကTouchscreen ရွေးစရာထိန်းချုပ်မှု configuration ကို menu မှာ။၁၀ သြဂုတ် 2019
ဟေ့ကောင်တွေ၊ ဒီဟာ Asda cheeky ပါ။ ဒီနေ့မင်းကနောက်ကွယ်မှာမင်းကိုပြမယ်၊ မင်းဒီ showcase ဆောင်းပါးကိုမမြင်ဖူးသေးတဲ့ Minecraft မှာဒီ touchscreen ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး၊ screen ပေါ်ရှိမှတ်စုကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆောင်လာကြပါ၊ မင်းတို့ယောက်ျားတွေ၊ မင်းအရင်ကမတွေ့ဖူးသေးရင်ရှုပ်ထွေးနေမယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်အဲဒီ့အတွက်ငါသုံးတဲ့နည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုပြသတော့မယ်ဆိုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုကျိုးနွံစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုပြမယ်။ ဒီ pixel တွေဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါပြမယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကိုသွားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါမှအောက်မှာတွေ့နိုင်တယ်၊ ငါတို့မှာရှိတာက Redstone ပစ္စည်းများတစ်ခုလုံးသည်အနီရောင်ကျောက်ကိုသုံးသောကြောင့်တည်း။ ကျောက်နီအနီရောင်သည်အေးမြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည့်အတိုင်းသူတို့အားဖိအားပြားများပေါ်၌အမြန်ပြန်လည်နုတ်ထွက်ပြီးနောက်၎င်းဒေါက်တာ Uck ပြားများကိုအလှည့်အစက်အပြောက်များဖြင့်သက်ဝင်စေသည်။ l ဤသည်မှာ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ပုံသည် Pixel ၏အောက်ရှိဤအရာများအပေါ်တွင်အလင်းရောင်ရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ဒီ itemdrop တစ်စက်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်သည်ဒီနေရာမှာ spawn တစ်ခုပါ။ ဒီတော့ဒီဇယားကွက်ထဲမှာ spawn တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကပိုပြီးတော့အကွာအဝေးများပါတယ်။ Redstone အတွက်နေရာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုတောင်းပြီးချိုမြိန်ပါတယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ဒီပဲပုပ်အောင်မြင်ရန်ထုံးစံဂုဏ်သတ္တိများများစွာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့ဆက်သွားအဲဒီမှာတက်ခုန်နှင့်သင်ဤဆုကြေးကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာ touchscreen ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေကြတယ်။ ဒီမှာ mobs တွေအတွက်အပိုဆုကြေးကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါဆိုဘယ် activate လုပ်ပြီး deactivate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံကိုတကယ်မြင်နိုင်တယ်၊ ဒီတော့ငါဒီလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်ငါ icon t hat ဆွဲနေတာကိုမြင်နိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်နည်းနည်းလေးတက်သွားရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ , အခြားနှင့်အခြား, ယခုဤလူအုပ်စု spawn သူတို့ကိုဝန်းရံတစ်ခု entity ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဤအလှူရှင်ယူနစ်လေးလုံးအဘို့အဘို့အရာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ငါရှေ့ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်အခြားကမ္ဘာသို့ခုန်ခြင်းနှင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်အတိအကျသင်ပြပါလိမ့်မယ် အဲဒီနောက် Minecraft အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပရိုဂရမ်အတော်များများကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးဒီဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာပြပါမယ်။ pixel တိုင်းအတွက်ဒီ unit တစ်ခုရှိတယ်။ ငါဒီကိုမင်းတို့အတွက်ဖြုတ်လိုက်မယ်။ ဒီမှာငါတို့ h တံခါးပေါက်နှစ်ခုပါသည့် instantRS သို့မဟုတ်တံခါးပေါက်တစ်ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြာရောင်တစ်ခုကိုဤနေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနေရာတွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်ချော်ရည်ပုံးတစ်လုံးပါသောထုတ်စက်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းတွင်ဘေးဘက်တွင်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးပါသည့် pipette တစ်ခုရှိသည်။ item ကိုများအတွက် redstone entity ၏ဤလူတိုင်းဖြစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ငါသာအုတ်များကိုပြန်လှည့်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် redstone သည်အေးမြသောကြောင့်ငါအခြား pixel များဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုသည့်တူညီသောပစ္စည်းကိုသာထားရှိမည်။ ဤတွင်ဤအရာကိုမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမဖြစ်နိုင်ပါ။ spawn သည် ဦး တည်ချက်တစ်ခုစီတွင်လုပ်ကွက် ၂ ခုအတွင်း capthat cap တစ်ခုရှိသည်။ entity ရှိလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ entity တစ်ခုပေါ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤပေးပို့မှုသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်ပါကယခုကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရပါက၎င်းကိုပြန်လည်ပိတ်ထားသည်။ အကယ်၍ ဤနေရာတွင်တက်ပြီးပြန်လည်ချိန်ညှိသည်ကိုပြန်လည်ကြည့်ပါကသင့်အနေဖြင့်လာရောက်လျှင်သင်ဘာလုပ်မည်ကိုသက် ၀ င်စေပါက၎င်းကိုထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဒီချော်ရည်ဟာဒီမှာပါ။ ဒါကဒီမှာခလုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာမနှောက်ယှက်နိုင်ပါ။ wegoso, အခုဒီချော်ရည်ကို topnow ပေါ်မှာတင်ထားလို့ပါ။ အကယ်လို့သင်ဟာငါးမိနစ်ကျော်လွန်လျှင်သင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်ကျဆင်းနေလျှင် ငါးမိနစ်ကျော်ကြာပိတ်ထားရန်လိုသော pixel သည်ပြaနာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်bသည်ပြန်လာလိမ့်မည် ဘာလို့လဲဆိုတော့ mobspawner ပတ် ၀ န်းကျင်ကအရာဝတ္ထုကိုပြန်လည်အသက်ဝင်စေဖို့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုမင်းမှာရှိတာကဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာမင်းမှာဒီလှူဒါန်းသူအားလုံးဆီပြေးနိုင်တဲ့လိုင်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ ၅ မိနစ်တိုင်းမှာဒီဟာကဒီကိုတကယ်ထိသွားတယ်၊ တကယ်တော့ပိုများသောအရာများ၌သတ်မှတ်သည်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အတွင်း၌ရှိပြီးဖြစ်သောအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်၎င်းသည်ထိုတွင်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု၎င်းသည်ဖွင့်လျှင်ပင် ၅ မိနစ်တိုင်း pulsates ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချစ်ရှိတယ်။ ဒါဆိုငါပြန်ခေါ်တာကိုပြန်သွားရင်အခုဒီဟာကမဖြစ်ပျက်မီအပင်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ငါးမိနစ်လောက်ထိလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုသေချာပေါက်ပိတ်သွားမှာပါ။ အဲ့ဒီ faunas တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသင်ပေးပါ။ program တွေကိုပြပါ။ ပြီးတော့ Pixel ပေါ်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကငါ့ကို Pixel ထဲကိုဝင်ပြီးရပ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျား f3 ကိုခေါ်ပါ။ မျက်နှာပြင်မှတ်စု၊ သင်၏ X ကိုသြဒီနိတ်၊ r Z ကိုသြဒိနိတ်။ Y သည်သင်၏ခြေထောက်အနေအထားကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏မျက်စိနေရာကိုသိမ်းဆည်းလိုပါကဤသည်မှာပထမဆုံးကိန်းဖြစ်သည်။ မိုင်းတွင်း၌ ၅၈ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၎င်းတို့ကိုချရေးပြီးပရိုဂရမ်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ခုန်ချလိမ့်မည်။ သင်ပထမဆုံးလိုအပ်သောပရိုဂရမ်မှာ Cam Use Custom Spawn ဟုခေါ်သည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်တွင်သင်ဒီမှာသင်ဝင်ရောက်လိုသည့်အရာနှင့်ဤအကွက်အားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုလိုလျှင်အောက်ပါဖော်ပြချက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ အဝေးရောက် spawn? တစ်ထောင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအရေအတွက်ဤနည်းဖြင့်၎င်းသည်အမြဲတမ်းတက်ကြွသော spawn isရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ tab တွင်သင်လုပ်ရမည့်အရာမှန်သမျှယခုသင်ဤအမှတ်အသားကိုယခုအမှတ်အသားပြုလိုသော slash movement အနေအထားသို့ရောက်သည်။ ဒီမှာသြဒီနိတ်တွေပြီးရင် point5ကိုအဆုံးမှာထားပါ။ အဲဒါကို block ရဲ့အလယ်မှာရောက်အောင်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် point5နဲ့ z z ကိုသြဒီနိတ်နဲ့ y ထပ်ကိန်းကိုအတူတူလုပ်ပါ။ ငါထင်တာကအကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့ဖိအားပြားပေါ်မှာထိုင်ပြီးသင်လုပ်ချင်တာကလူလှုပ်ရှားမှုဒေတာကို tag လုပ်လိုက်တာပဲ။ အခု box ထဲမှာရှိတဲ့သုညတွေအားလုံးနဲ့ Mississippi tab မှာအမှန်ခြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဒီနေရာမှာဒုတိယနေရာမှာထားတာပါ။ agent id now id ဒါကသင်လိုချင်တဲ့အရာအားလုံးရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအိုင်ဒီပါ။ တကယ်တော့ဆောင်းပါးအိုင်ဒီပါ။ စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ယုဒလူဖြစ်လျှင်ယခုအထိ ၆၀၀၀ se ။ ဒါကြောင့် ၆၀၀၀ ဟာထိပ်ဆုံးမှာပါ၊ ဒီအချိန်မှာ ၅ မိနစ်၊ ချက်ချင်းပဲ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကအရမ်းအမှန်ခြစ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်နှင့်ပြီးပြီအခါကဒီမှာလာdထိ add entity ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင်ဤရွေးစရာများအားလုံးကိုသင်လုပ်ပြီးပြီ။ သင်အောက်တွင်လိုချင်သည့် entity name နှင့် clickcreate now ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤ program ကိုသင်ထည့်သွင်းခဲ့သည့် denspawner ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဒါဆို MC ထဲရောက်နေပြီဆိုရင်၊ ဖော်ပြချက်မှာပါတဲ့ link ကိုတည်းဖြတ်မယ်၊ မင်းမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အခု upload လုပ်လိုက်ပါ။ ကစားသမားတစ် ဦး တည်းသောကမ္ဘာ၊ Load အစား Open World ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သင်အလိုရှိသည့်နေရာတွင်သူတို့သည်သင့်ထံသို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။ S ကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ spawner ကိုထည့်ပြီး import ကိုယခုသွင်းပါ။ သင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်၌ canvas custom spawnus ကိုထည့်သွင်းပြီးပြီ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကို schematic folder တွင်သိမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို test ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည်။ spawner ကျွန်ုပ်တို့သင်လိုချင်သည့်နေရာကိုနှိပ်ပြီး import ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်လုပ်ရန်သာလျှင် save ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုအခါကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ သင်သည် mycraft ထဲသို့ချက်ချင်းပြန်ခုန်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီမှာတွေ့နိုင်တာကအဲဒီမှာပတ်ပတ်လည်ဝန်းရံထားတဲ့ ag lilited entity တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကိုပြန်မပေါက်အောင်တားဆီးပေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဒီကောက်ယူတာကိုစတင်ရမယ်။ ဒီနေရာမှာဒီမှာတွေ့နိုင်တာကဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အလုပ်လည်းကောင်းတယ်၊ ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ တကယ်တော့အဲ့ဒီ့နည်းနဲ့ထပ်တူမကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာဒါကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့်အထက်မှာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြသခဲ့သူအိုင်ဗန်ကိုလိုအပ်တယ်။ အဲဒီမှာ redstone နည်းနည်းသာရှိဖို့သေချာအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက powered ပြီးသားနှင့်ထရပ်ကားဒါထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယခုငါတို့တွေ့ပြီ။ Set ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါပြန်လည်ချိန်ညှိလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် pixel များပြန်ပြင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ despawn တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း pixel တစ်ခုချင်းစီသည်ယခုအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် Pixel လိုအပ်လျှင် ၅ မိနစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ထားရန်၊ ၎င်းကိုဖွင့်ထားသည်၊ ပုံသေတပ်ဆင်ထားသောနည်းလမ်းမှာဤစက်ပစ္စည်း၏နောက်ကွယ်တွင်မျဉ်းကြောင်းထားရန်နှင့်ဤစက်ပစ္စည်းလူရမ်းကားထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်ဆိုပါက၎င်းသည်နောက်ကွယ်ရှိပါက၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှဖြစ်နေလျှင်၎င်းသည်မလုပ်နိုင်ပါ။ ' ဒါကို activate လုပ်ပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါက dispensers တွေမှာထူးဆန်းတဲ့ quirks တွေရှိလို့ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ dispenser ဟာပုံမှန်အားဖြင့် power လုပ်ထားတာကြောင့်ဒီ dispenser ကပဲပုပ်ကိုအမှန်တကယ်ပဲပစ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတာပါ။ , ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်၊ ဒီ pixel တွေကိုအရာအားလုံးဘယ်လိုထိန်းချုပ်သလဲ၊ ဒီမှာဒီအပြာရောင်၊ ထိပ်ဆုံးအပြာ ၂ ခုကမတူညီတဲ့ Reset လိုင်းတွေ၊ ပြီးတော့ဒီအပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်သုံးခုကမှားတယ်၊ မျဉ်းကြောင်းထွက်သို့မဟုတ်ထို့နောက်ထွက် ဒီမှာမီးပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာမီးဖွင့်ပြီး pixel ကိုချိန်ညှိတဲ့အခါပုံအခြေခံအားဖြင့်ပုံရိပ်တွေကိုသိမ်းဆည်းထားတယ်၊ အခုဒီစက်တစ်ခုလုံးမှာလက်ငင်းဝါယာကြိုးတွေအများကြီးကိုအသုံးပြုနေတယ်၊ ​​အဲဒီအကွက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်လဲ။ ချက်ချင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းကိုချက်ချင်းဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အချို့သောနေရာတွေမှာသုံးရမယ်။ ကိုယ့်နေရာတိုင်းနီးပါးမှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီဂိတ်များကလူတွေဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ပါ။ ဤအရာသည်အမြန်ဆုံးလုပ်ရန်၊ ၎င်းသည် frame တစ်ခုကိုချက်ချင်းမှတ်မိစေရန်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၌သင်တစ်ထောင့်မှတစ်ချက်သို့လျင်မြန်စွာမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လည်း၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အမူအယာများကိုဤနည်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေသည်။ ဤတွင်အညိုရောင်ဆားကစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်မှအခြားတစ်ခုသို့ရွေ့လျားသည့်အမူအယာများကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းများတွင်အသုံးပြုရန်နှင့်၎င်းပေါ်ရှိတူများကိုဤ Wanted နာရီမှစစ်ဆေးရန် player position နှင့်သူသည် command များကိုဤစမ်းသပ်မှုများမှတဆင့်ကစားသူ၏အနေအထားကိုစစ်ဆေးသည်။ pixel တိုင်းအတွက် command သည် test တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက် player သည် radius 1 ဖြင့် radius 1 နှင့်အတူထို pixel ၏သြဒီနိတ်ကိုစစ်ဆေးသည်။ ညာဘက် pixel re သို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ block အတွက်ဒီစမ်းသပ်မှုသည် command block ကိုအစပျိုးသည်နှင့်ကစားသူက၎င်းတွင်ရှိလျှင်၎င်းသည် Aredstone ပြgivesနာကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ကစားသူများ၏နေရာကိုပြောပြနိုင်သည့်နည်းဖြစ်သည်။ ဘေးပတ်လည်တွင် circuit ကိုအစပျိုးသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ကစားသမားဖြစ်လျှင်နှောင့်နှေးမှုတစ်ခုအတွင်းမျက်နှာပြင်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ရှာဖွေခြင်းသည်ဤမျှဝေးဝေးသို့သွားရန်သင်အချိန်ယူရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဘက်ခြမ်းကိုသွားပါ၊ နောက်တစ်ဖက်သို့သွားပါ၊ နောက်တစ်ဖက်တွင်ရှိနေရန်အလွန်နောက်ကျနေပါလိမ့်မည်၊ အလွန်နောက်ကျနေပါကအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းရှိနေပါမည်။ အခြားဘက်ခြမ်းမှာနှောင့်နှေးတာကဆိုလိုတာက screen ကို swiping လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့တခြားနည်းအတူတူပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ငါသူတို့ကို apps အမျိုးမျိုးသုံးပြီးကွဲပြားတဲ့နည်းတွေနဲ့သုံးဖို့ချိတ်လိုက်ရုံပဲ။ ဒါပေမယ့်အနှစ်ချုပ်ကတော့ ဒီတော့ဒီတစ်ခုလုံးဟာဒီဒြပ်ထုတစ်ခုလုံးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ် ဝါယာကြိုးများ၊ အပြန်အလှန်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ယုတ္တိဗေဒဆက်စပ်မှုများကျွန်ုပ်သည်အခြေအနေများစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများဖြစ်ပျက်လာသောအခါမည်သို့ဖြစ်ပျက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။
ဒါကပတ်ပတ်လည်ပျံသန်းရုံနဲ့လူတွေကိုပြတာဒီအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ။ ဒီအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်နိုင်ဖို့မင်းဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေအတွက်တံခါးကျင်တွေဒီမှာရှိနေတယ်။ reset များအတွက် app ၏ home screen အတွက် lock screen ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုပြောရန်ဤ command box ကဲ့သို့သောအရာများကိုသင်သိသည်။ ဤအပိုင်းအစသည်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော command box ထဲသို့ပြေးဝင်သွားသည်။ ဒီနေရာမှာဒီဟာကသူတို့သော့ခတ်ထားတာကိုစစ်ဆေးတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကသူ့ကိုသော့ခတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ ဒီတစ်ခုက home ခလုတ်ဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာမတူညီတဲ့အရက်ဆိုင်တွေထဲကိုသွားကြတယ်။ အတွင်းနှင့်သင်အရာအားလုံးကိုလုပ်ရန်ဤအရာသည်ဤယူနစ်မှထိန်းချုပ်သည်။ ဤအရာသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မူလမြင်ကွင်း မှလွဲ၍ သင်သည်အမျိုးမျိုးသောခလုတ်များနှင့်အရာများကိုနှိပ်ရမည်။ ဖန်သားပြင်နှစ်ခုလုံးတွင်နှိပ်နိုင်သောခလုတ်နှစ်ခုရှိသည်၊ သို့ ဖြစ်၍ ဤလိမ္မော်ရောင်ဆားကစ်ကိုဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ ဤလိမ္မော်ရောင်ဆားကစ်နှင့်ဤတစ်ခုအောက်တွင်ရှိသည်။ မူလမြင်ကွင်းတွင်၎င်းတွင်ပါရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ခလုပ်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုင်းကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်လျှင်မပါလျှင်၎င်းအားလုံးသည်ဤလက်ငင်းလက်ငင်းလက်ဆုပ်လက်ကိုင်အရာသို့သွားသည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်iantရာမသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောကြောင့်ကစားသမားသည်မူလမြင်ကွင်းတွင်သူတို့ရှိနေသည့်နေရာတစ်နေရာ၌ရပ်နေသည်။
ငါဒီတစ်ခုနဲ့တစ်နာရီအတူတူပေးနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ငါတို့စာမျက်နှာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့သင်အသုံးပြုနိုင်တယ်၊ သင်ဖြစ်ခဲ့တာကဘယ် Linda ကစိတ်ကျတယ်၊ ပြီးတော့သင်အခုသင်လုပ်ရမှာကဘယ် app ကိုမဆိုစလုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုပြပါ။ ဒါဆိုငါတို့ကအစမှာပန်းချီသွားမယ်။ ဒီပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ခရမ်းရောင်ပတ်လမ်းအားလုံး၊ ခရမ်းရောင်သိုးမွှေး။ ဒီအရာအားလုံးကဒီအက်ပ်တွေအတွက်။ ဒါငါတို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ ဟုတ်တယ်ငါဘယ်တော့မှစနစ်တကျရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကဒီနေရာမှာဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကထိန်းချုပ်ထားပြီးအမှိုက်သရိုက်များကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်တွဲဖက်ထားသည့်အပိုများစွာသောယုတ္တိဗေဒများပါရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်၊ အမှန်တကယ်ပိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ပြောင်းပြန်လှန်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဤ redstone အားလုံးကိုရှင်းလင်းပစ်လိုက်သည်။ ဤ ၁၂ လုံးလုံးသည်ဤ Kolb en ကိုမြင်ရန်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသောအခါဆိုလိုသည်မှာ commands များအတွက်စမ်းသပ်မှုများကိုယခုအသက်သွင်းနိုင်သည်။ t ပညတ်တော်တို့ကိုအဘို့ဤစမ်းသပ်မှုခွင့်ပြုခဲ့ပါလျှင်, သော့ခလောက် ထိပ်မှာ၊ ဒီလိုင်းကိုဒီနေရာမှာအစပျိုးသည်။ အခြေခံအားဖြင့် tick (၈) ခုတိုင်းနှင့်တူသောတစ်ခုခုနှင့် pixel တိုင်းကို pulse လုပ်ရန် command block တစ်ခုချင်းစီကိုအခြေခံပြီးလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက်အခြေခံအားဖြင့်ကစားသမားတစ် ဦး သည်သူတို့ထိုင်ခုံတွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ထိုအနေအထားတွင်ရှိလျှင်ဆင်းသွားပြီး pixel ကိုချိန်ညှိပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းလင်းသည်။ အကယ်၍ သင်ဤလိုင်းကိုမတွေ့သောအခါ၊ Paint လည်ပတ်သောအခါ၊ ၎င်းသည်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် Paint အလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ။
Daylight sensor နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ရိုးရှင်းသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒုတိယအက်ပလီကေးရှင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအေးသည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်သည်၊ ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်။ မှားယွင်းနေသည်၊ အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဒါကိုမြင်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါက 1x1 pixel ကြော်ငြာတစ်ခု၊ နည်းနည်းလောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြသဖို့ screen ပေါ်က checkerboard ကိုပဲအမှတ်ရနေတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ဒီလိုင်းကိုအားလုံးပိတ်ထားလိုက်ပြီး၊ သင် app ကိုထွက်သည့်အခါ၎င်းသည် app မှရရှိသည့်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်မှတ်မိသည့်ပုံရိပ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်သို့မဟုတ်နေ့အလင်းရောင်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ယခုကျွန်ုပ်ပြသရန်မှာပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ ငါတို့ကြည့်ရတာဒီမှာ Cyan Wolfs တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီ Daylight sensor အတွက်ပဲမင်းကိုပြမယ်။ ဒီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ Seer ဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ သူရောက်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအားဖြင့်သူလုပ်တာနှစ်ခုလုပ်မယ်။ သူကအဲ့ဒီလက်နှိပ်ဓာတ်မီးမှတဆင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ် အရာဝတ္ထုပျက်သွားပါကဤနေ့အလင်းရောင်အာရုံခံကိရိယာများသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့မှသာထိုအရာသည်၎င်းအတွင်းသို့ ၀ င်လာပြီးအရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသောဘားတစ်ခုချင်းစီနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့စတုဂံကိုသွားပြီးတိုးတက်မှုဘားပတ်ပတ်လည်မှာတြိဂံကိုတင်လိုက်တာပါ။ ဒီယူနစ်တွေထဲကတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ၊ ဒါ့ကြောင့်နေ့ခင်းဘက်အာရုံခံကိရိယာကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့အရာနဲ့ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ signal strength သည်ယခုဝင်လာပြီ၊ signal strength သည်ဆက်လက်အားနည်းလာသည်။ ထိုလမ်းကြောင်းဆီသို့သွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဒီမှာဒီလုပ်ကွက်များကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပိုဝေးနေပြီဆိုတာကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်မြင်နေသည်ဖြစ်စေမမြင်နိုင်သည်။ ဒီတစ်ခုကနောက်တစ်ခုနှင့်နောက်တစ်ခုမှာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချက်ပြမှုစွမ်းအားနိမ့်သွားသည်။ Weras ကဤလမ်းကြောင်းသို့သွားသည်။ အဆင့်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းအဆင့်နှင့်စတင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ယခုထွက်လာလျှင်၎င်းသည်ပိတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် worki အတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ် ng ပြည်နယ်နှင့်ထို့နောက်သူက signal ကိုအစွမ်းသတ္တိသည်အဘယ်အရာသည်ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်သည်ထို့နောက်သူကထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီနိုင် Bar ကို activated ပြီးတော့သူကပြောင်းပြန်လှန်နှင့်အတူအလွန်လွယ်ကူသည် inversion နှင့်အတူပြန်လည်စတင်နှင့်အတူကပိုမိုကျယ်ပြန့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဒါမှတ်မိပါလိမ့်မယ်နှင့် ကျွန်တော် Pulse ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ monostable တစ်ခုထဲကို boot တက်လိုက်ရင် reset မျဉ်းကတူညီတဲ့ဘားကိုတုန်ခါသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကအမှန်တကယ်ခွင့်ပြုထားတာထက်အမှောင်ကျလာတဲ့အခါ၊ ပြန်လည်စတင်ပြီးနေ့အလင်းရောင်အာရုံခံကိရိယာအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဒီယူနစ်များထဲမှ ၁၂ ခုသည်မတူညီသောအချက်ပြနိုင်သည့်ဘားများနှင့်အတူဖြစ်သည်။ သို့မှသာအလုပ်လုပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်အစပျိုးနှင့်ဤနေ့ခင်းဘက်အာရုံခံကိရိယာအလုပ်လုပ်ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်သားပြင်ကို Lock လုပ်ဖို့သူလုပ်ရမှာကအနေအထားကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ ငါအခြေခံအားဖြင့်ဒီသော့ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ စက်ကိုငါအခုသော့ခတ်ထားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်၊ အဲဒါကဖြတ်သန်းသွားပြီး master reset line ကိုအစပျိုးလိမ့်မယ်။ ဒီမှာပါ၊ ဒါကအခြေခံအားဖြင့် pixel တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ pixel တွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်တော့မှာပါ။ aswalking ကအရမ်းလွယ်ကူသွားတာပါ။ ဒါ့အပြင်နောက်ကွယ်မှာအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်၊ သင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ငါကဒီမှာနာရီပေါင်းများစွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ယောက်ျားတွေသင်ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပွုနိုငျသောနည်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာများကိုတက်ခူး, ဟုတ်ကဲ့, သင်တစ်ခုခုကိုလုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကမှတဆင့်သွားနှင့်ရှင်းပြချက်၏တစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်ရှင်းပြကြဘူး
touch screen လက်တော့ပ်ပေါ်တွင် Minecraft Java ကိုကစားနိုင်ပါသလား။
ဟေး, ရုပ်သံလိုင်းကိုပြန်ကြိုဆိုပါတယ်! ဒီနေ့ဆောင်းပါးကကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး Chromebook မှာ Minecraft ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာပါ။
ထိုသို့ဖြစ်ရန် Linux beta အထောက်အပံ့အပြင် GPU အရှိန်လည်းလိုအပ်သည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဆောင်းပါးနှစ်ခုရှိသည်။ အပေါ်ထောင့်နှင့်အောက်ခြေရှိဖော်ပြချက်တွင် link တစ်ခုကိုငါတင်မည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်။
သင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက comment အပိုင်းနှင့်အရာအားလုံးနှင့်မကင်းပါစေနှင့်။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ Chrome OS ၌ရှိနေပြီးသင် Linux Betas နှင့်သင် Linux Betas အထောက်အပံ့၊ GPU acceleration ကိုဖွင့်ထားပြီ။ အခု activate လုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက် flag တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီး Chrome ကိုသွားပြီး slashFlags ကိုလျှော့ချမယ်ဆိုရင်သင် mouse ကိုမလိုအပ်ဘဲ၎င်း screen ကို lock မလုပ်ရင် Linux applications တွေအတွက် pointer lock ကို enable လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ မြင်ကွင်း၏အစွန်းအထိသင်ကြားပါလိမ့်မည်သင်ဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည်အတွေ့အကြုံကောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုဖွင့်ပါ၊ သင့်ကွန်ပြူတာကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ ကျန်သောဒီတပ်ဆင်မှုအတွက်ပြန်လည်သင့်လျော်ပါ။ ယခုအချိန်တွင် Minecraft ကို download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Chromebook တွင်ထည့်သွင်းပါ။ ထို့ကြောင့် Chrome ကိုဖွင့ ်၍ ဤ Minecraft - Alternate Download This on သို့သွားပါ။ ကျွန်တော်ဒီဖော်ပြချက်ရဲ့အောက်ခြေမှာချိတ်ဆက်ထားသည့် Minecraft ၏တရားဝင်ဆိုဒ်ကိုဒီအရာအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သော version သို့ပို့ပေးပါ၊ ၎င်းဗားရှင်းသည် Debian Ubuntu ဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Minecraft de Bie ကိုဤမျှလောက်ရလိုကြသည် ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်လျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြာသောအလွန်မြန်ဆန်သော download ဖြစ်သည်။ ယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးပြီဆိုလျှင်ဒီ dialog ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် Downloads folder သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန် Minecraft deBie ဖိုင်ကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ Installer dialog ကိုဖွင့်ပြီး Install Now ren ကိုနှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်, သူကမှီခိုအားလုံးရရှိသွားတဲ့, အဲဒါကိုမှတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါတို့လျှောက်လွှာကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျနော်တို့ကစတင်နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဲဒီမှာငါတို့ရှိသမျှသည်ပြုနိုင် ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်စတင်ပါသို့မဟုတ်သင်မြင်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ Linux အက်ပလီကေးရှင်းရှိမီနူးသို့သွားပါကကျွန်ုပ်တို့၌ Minecraftlauncher ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အထားများနှင့် log လုပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ log in လုပ်ပြီးသည်နှင့်ရှေ့ဆက်သွားပြီး play ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအချက်၌ဖိုင်များအားလုံးကို download လုပ်လိမ့်မည်။ အခြား J တွင် Minecraft ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်လိမ့်မည်။
ဒီ Chromebook မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ကစားနိုင်အောင်ကစားစေချင်တယ်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြတ်သန်းသွားတယ်။ တုံးတွေကို ၁၀ နည်းနည်းလောက်လျှော့ချပြီးလုပ်မယ်။ ဂိမ်းအသစ်ပဲ၊ ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကိုဖန်တီးပြီးဒီ Chromebook မှာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာပြသနိုင်ဖို့ခုန်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီမှာငါတို့ကနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်တချို့အပိုင်းအစတွေကို load လုပ်လိုက်ရင်ငါတို့သွားနိုင်တယ်။ ' Minecraft အတွက် Chromebook ကိုတက်။ ဒါကြောင့်ထိပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက် frame တွေမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီပွင့်လင်းတဲ့moveရိယာကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်အခြား frames တွေလိုပဲအခုနောက်ထပ် frames အနည်းငယ်ရလိမ့်မယ်။ Optifine နှင့်၎င်းမှအနည်းငယ်ပိုသောစွမ်းအားကိုရယူပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် settings ထဲကိုဝင်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရပ်ဖစ်သို့သွားလျှင်မြန်လွန်းသည်၊ အနည်းငယ်မျှထပ်မံကျဆင်းသွားနိုင်ပြီး vsync က၎င်းသည်လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်စေမရကိုမြင်နိုင်သည်။ ဂိမ်းများအတွက်မဟုတ်ဘဲအားနည်းချက်အနည်းငယ်ဖြင့်၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းစက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သာဖြစ်ပါက mine minecraft နှင့် roblox နှင့်အခြားဂိမ်းများစသည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်ဤ Chromebook တွင်အထူးစမ်းသပ်လိုသည့်ဂိမ်းများကိုသင်ကြည့်လိုပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည်ရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ မကစားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ အခမဲ့ဂိမ်းဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
putty rnd ဖိုင်ကို
ငါအပျော်အပါးနှင့်အတူလုပ်ပါ။ သင်၏လက်မကိုမြှောက်လိုက်သောအချိန်တွင်သင်ဤအရာသည်တကယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးထပ်မံစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်အသိပေးခြင်းခေါင်းလောင်းထိုးခြင်းကိုတွေ့လိုပါကသင်မည်သည့်အချိန်ကိုသိနိုင်မည်နည်း။ ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ပုဒ်တင်လိုက်ပြီ။ ရပ်နားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့တွေ့မယ်
သင် Minecraft ကိုတက်ဘလက် mode မှာကစားနိုင်ပါသလား။
တက်ဘလက်များ၊ hybrids နှင့် laptop များ
မကြာသေးမီက Apple နှင့်Androidတက်ဘလက်များသည် Pocket Edition ကိုအသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်သည်Minecraftဗားရှင်းအပြည့်မဟုတ်ပါ ပြနာကဒါပဲMinecrafttouch-tablet များအတွက်မဟုတ်ဘဲကီးဘုတ်၊ mouse နှင့်အသုံးပြုရန်ရေးခဲ့သည်။၇ သြဂုတ် ၂၀၁၄
touchscreen ထိန်းချုပ်မှုများကို Minecraft ထဲသို့မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
minecraft သို့ touchscreen ထိန်းချုပ်မှုများကိုထည့်သည်။ သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Minecraft Forge (http://files.minecraftforge.net) တပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ Options- & gt; Controls သို့သွားပြီး Touchscreen Mode ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုလုပ်ပါ။ Mod settings များကို Main Menu သို့သွားပြီး TouchControls- & gt; Config သို့သွားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ touch screen သည် Minecraft တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏ touchscreen သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Windows နှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။ Java version အတွက် touch သည်ပြmanyနာများစွာကိုဖော်ပြသောကြောင့်သင်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပြproblemsနာရှိသလားဟုငါမေးသည်။ ဤပြန်ကြားချက်သည်အထောက်အကူပြုသလား။
Minecraft Forge တွင်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Minecraft Forge (http://files.minecraftforge.net) တပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။ Options- & gt; Controls သို့သွားပြီး Touchscreen Mode ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုလုပ်ပါ။ Mod settings များကို Main Menu သို့သွားပြီး TouchControls- & gt; Config သို့သွားပါ။
Touch- Mode ကိုသွားပြီး Touchscreen Mode ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများကိုလုပ်ပါ။ Mod settings များကို Main Menu သို့သွားပြီး TouchControls- & gt; Config သို့သွားပါ။